Kedu otu ị ga - esi jide n'aka na ndị mgbasa akụkọ gị na - agụ mmadụ ọ bụghị robot?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Kedu otu ị ga - esi jide n'aka na ndị mgbasa akụkọ gị na - agụ mmadụ ọ bụghị robot?
Aviation • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Ndi akuko • Technology • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A na -atụfu gị mgbe ị na -ewepụta akwụkwọ akụkọ? Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mgbasa ozi PR edeela mwepụta mgbasa ozi mara mma, imirikiti ụlọ ọrụ na -ewepụta mwepụta na ndepụta nke ọdụ data mgbasa ozi, na -enwe olileanya maka mbipụta freebie. Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ na -akpọ "Earned Media." N'aka nke ọzọ, “Media akwụ ụgwọ” na -enye ndị na -ekesa mwepụta ha ikike zuru oke maka ika na izi ozi gị. eTurboNews gbakwunyere ọkwa abụọ ọzọ na ya, ọ pụtara na a ga -akwụ gị ụgwọ naanị dabere na ihe ịga nke ọma.
Ịkesa akwụkwọ akụkọ bụ nnukwu azụmahịa, mana mbipụta dịka eTurboNews anaghị abụkarị ndị na -enweta ego azụmaahịa a,
A na -akwụ ụgwọ nnukwu ọrụ waya nkesa dị ka PR Newswire ka ọ na -ekesa mwepụta na ntinye, yana n'otu oge ahụ na -akwụ ụgwọ akwụkwọ ikike maka mbipụta ndị isi.
Ọtụtụ oge mbipụta akwụkwọ akụkọ na -ejedebe na azụ azụ azụ nke ọnụ ụzọ ámá dị ka Yahoo Finance, Journal Business, na -ewepụta akụkọ dị egwu n'ịtụle ọnụọgụ ndị na -agụ akwụkwọ.
eTurboNews na -ahụ ugbu a, na ndị na -agụ akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi azụmahịa nke ebipụtara na ọnụ ụzọ eTN bụ n'ezie mmadụ ọ bụghị robots.
Mgbe ị na -enyocha akụkọ nkesa maka mbipụta mgbasa ozi ezigara site na ụfọdụ ọrụ waya, mmadụ nwere ike ịhụ kọmpụta na -akparịta ụka. Ụlọ ọrụ na-ebipụta ntọhapụ na-enwetakarị akụkọ nwere ọnụọgụ nde siri ike mgbe n'ezie naanị otu narị hụrụ akụkọ a bipụtara n'akwụkwọ ziri ezi. Ihe na -erughị mmadụ ole na ole mepere wee gụọ mwepụta ahụ, na -ebute na ọpịpị ole na ole na njikọ agbakwunyere na ọdịnaya ntọhapụ ahụ.
Ọnụ ego maka mwepụta nwere ike banye puku kwuru puku yana obere nsonaazụ.
Mgbasa ozi enwetara pụtara akwụkwọ ndị nwere ndị na-ege ntị chọrọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile n'akụkụ ndị na-anaghị enweta ego na agbụ a. Enwere obere mkpali ibipụta akwụkwọ akụkọ nke gụnyere ọdịnaya mgbasa ozi.
eTurboNews esịmde akan Nde mmadụ abụọ na -agụ akwụkwọ kwa ọnwa wee wepụta usoro mmeri/mmeri: Ndị na -agụ mmadụ!
eTurboNews ọhụrụ Atụmatụ Nzipu Mwepụta na -enweghị njedebe gbaa mbọ hụ na ndị ahịa na -akwụ ụgwọ naanị mgbe onye na -agụ ya nwere ezi mkpali iji mepee akwụkwọ akụkọ, gụọ ya wee pịa njikọ ọ masịrị ya. Ọtụtụ njikọ na -aga na webụsaịtị ụlọ ọrụ na -ebipụta.
Ozugbo onye na -agụ pịa ụdị njikọ a, a ga -akwụ ụgwọ n'etiti cents 15 ruo $ 1.50 kwa pịa, dabere na atụmatụ ahụ. Oke ụgwọ agaghị agafe 1000 pịa kwa mwepụta.
Ọ bụ maka mmasị eTurboNews idobe mwepụta azụmahịa nke ọma, nyochaa ya maka isi okwu na isi akụkọ na -atọ ụtọ, ma debe ya maka igwe ọchụchọ, APPS akụkọ, na ọrụ akụkọ mkpokọta, dị ka Akụkọ Google.
Mbipụta mgbasa ozi ọ bụla ga-esonye na akwụkwọ akụkọ email zuru ụwa ọnụ na-emeri eTN. Ihe karịrị nde ndị na -agụ akwụkwọ 1/2 ga -enweta ọkwa mkpọsa na ọdụ kọmputa ha na -egosi isi ntọhapụ nwere njikọ na akụkọ ahụ.
A na -ebipụta akwụkwọ akụkọ na ya eTurboNews a na -atụgharị ya ka ọ bụrụ faịlụ ọdịyo wee biputere ya eTurboNews. A ga -atụgharịkwa ya ka ọ bụrụ pọdkastị.
A na -atụgharị pọdkastị ka ọ bụrụ Vidiyo Livestream na biputere na ihe karịrị nyiwe 16, gụnyere YOUTUBE, APPLE, Soundcloud, Anchor, Google, wdg.
A ga -atụgharị asụsụ ntọhapụ ahụ n'ihe karịrị asụsụ 50 ma tinye ya na ọwa ozi ọhụrụ nke eTN, nọọrọ onwe ya na nke raara onwe ya nye.
Nke a na -eme ụmụ mmadụ na -eche na ọtụtụ mmadụ ibe anyị n'ụwa ga -agba ume ịgụ na imekọ ihe na ọdịnaya nke akwụkwọ akụkọ.
Ndị otu ahụ edebara aha na atụmatụ ndenye aha na -akparaghị ókè na -enweta nlebara anya ka ekwuru ha n'ime akụkọ etitorial na -abịanụ. A na -akpọkwa ndị otu a ka ha gbaa ajụjụ ọnụ na mgbasa ozi akụkọ eTV kwa ụbọchị, ma ọ bụ dị ka onye sonyere ma ọ bụ onye ọbịa na mkparịta ụka panel Livestream na -abịanụ.
Ndị otu atụmatụ ịdebanye aha ọdịnaya na -akparaghị ókè na -enwetakwa otu nkwado na Network Njem Nleta Ụwa (WTN).
More ọmụma: www.travelnewsgroup.com/unlimited
More ozi na akwụkwọ akụkọ ndị mmadụ